Gudoomiyaha B/hirshabelle: Wadahadalka weli waa uu furanyahay | Dhacdo
Home Wararka Maanta Gudoomiyaha B/hirshabelle: Wadahadalka weli waa uu furanyahay
Gudoomiyaha B/hirshabelle: Wadahadalka weli waa uu furanyahay
Gudoomiyaha Baarlamaanka Hirshabelle, Sheekh Cismaan Barre Maxamed ayaa sheegay inuu socon doono Dhismaha Maamulka Hirshabelle, iyadoo dadka tabashada qaba uu ugu baaqay inay yimaadaan Magaalada Jowhar.
Gudoomiyaha ayaa dhawr bilood ka dib waxa uu Sabtidii dib ugu laabtay Magaalada Jowhar, halkaasoo uu ka sheegay in uu u yimid dardargelinta arrimaha doorashooyinka.
Gudoomiyaha oo wareysi siiyay Radio Kulmiye ayaa iftiimiyay in dadka tabashada qaba lala hadli doono, isla-markaana ay jiri doonto is qancin.
“Waxaan idin sheegaya in Dhismaha Maamulka Hirshabelle uu socdo, wixii tabasho qabana waxaan leeyahay Caasimadda Jowhar hala isugu yimaado, waala wadahadlayaa, waana la’is qancinayaa.” Ayuu yiri Gudoomiyaha.
Sidoo kale waxa uu sheegay in Odayaasha Dhaqanka ay imaan doonaan Magaalada Jowhar, iminkana ay ku sugan yihiin Dowladda Federaalka iyo waxgarad kale.
“Odayaashii Dhaqankaa imaanaya, Dowladda Somaliya ayaa joogto, waxgarad kalana way jooggaan. Wixii dib-u-heshiisiin iyo wadahadal u baahan, wadahadalka weli waa uu furanyahay.” Ayuu yiri Sheekh Cismaan Barre Maxamed, Gudoomiyaha Baarlamaanka Hirshabelle.
Hadalka ka soo yeeray Gudoomiyaha Baarlamaanka Hirshabelle ayaa ku soo aadaya, xilli Madaxweynaha Hirshabelle, Maxamed Cabdi Waare uu toddobaadkii hore sheegay in doorashada ka hor loo baahanyahay in dib-u-heshiisiin loo qabto beelaha deegaanka.
Previous articleWararkii ugu dambeeyay dil caawa ka dhacay Masaajid ku yaala Gaalkacyo
Next articleWasiir Caadle oo ka hadlay dhabaha loo marayo Dhismaha Hirshabelle